Fiteny ponika - Wikipedia
Ny fiteny ponika, izay atao hoe fiteny kartazinoa na fiteny feniko-ponika dia fiteny tao Kanaana, karazan'ny fiteny fenisiana efa tsy mpiteny intsony, isan'ny fiteny semitika, izay nosoratana avy ankavanana miankavia, tsy mampiasa zanatsoratra sahala amin'ny fanoratana ny fiteny fenisiana ihany.
Nandritra ny sivilizasiona fenisiana (na foinikiana) no nitenenan'ny Ponika ny fiteny ponika tao Afrika Avaratra sy tao amin'ny nosy mediteraneana maro teo anelanelan'ny taona 1100 sy 700 tal. J.K. tao amin'ny tananan'i Kartago (na Kartazy) izay tao amin'ny misy an'i Tonizia ankehitriny. Nifandray amin'ny Foinikiana (na Fenisiana) sy amin'ny faritra maro nofeheziny ny Ponika hatramin'ny nandravan'ny Repoblika romana an'i Kartago.
Ny abidy ponika, sahala amin'ny an'ny fiteny fenisiana izay iray karazana aminy, dia ahitana litera renisoratra miisa 22. Na dia mpihavana aza ny abidy roa dia misy litera fenisiana sasany izay tononina amin'ny fomba somary hafa amin'ny fiteny ponika raha ampitahaina amin'ny an'ny fenisiana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_ponika&oldid=1012344"
Dernière modification le 13 Jiona 2021, à 10:40
Voaova farany tamin'ny 13 Jiona 2021 amin'ny 10:40 ity pejy ity.